College History - Japan Electronics College
ဂျပန်အဆင့်မြင့် တီလီဗင်းရှင်းနည်းပညာကျောင်းအဖြစ်အမည် ပြောင်းလဲ။
ဂျပန်အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာကောလိပ် အဖြစ် အမည်ပြောင်းလဲ၊ ကျောင်းတည်ထောင်ပြီး ၁၀ နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်နေ့၊ တရားဝင်တည်ထောင်ထားသော အီလက်ထရောနစ် ကောလိပ်အဖြစ် ထောက်ခံချက်ရရှိ။ တီလီဗင်းရှင်းနည်းပညာကျောင်းအဖြစ်အမည် ပြောင်းလဲ။
ကြေးနန်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ခွင့်ပြုချက်ရရှိသော ကျောင်းဖြစ်လာ။
(အဆင့်၂ ၀ါယာလက်နည်းပညာရှင်၊(အီလက်ထရောနစ် အင်ဂျင်နီရာဘာသာရပ်))။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် စက်မှုလက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ ခွင့်ပြုချက်ရရှိသော
ကျောင်းဖြစ်လာ၊(ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း လျှပ်စစ်ပညာရှင် ဘာသာရပ်)။
မိန်းကျောင်း အဆောက်အအုံ့ ပြီးစီး။
သတင်းအချက်အလက် စီမံခန့်ခွဲခြင်းဘာသာရပ် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအသစ်ပြဌာန်း၊ သတင်းအချက် အလက်နည်းပညာဌာန ဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက် ကွန်ပြူတာနှစ်လုံး တိုးချဲ့၊ ကျောင်းအမှတ်(၂) ဆောက်လုပ်ပြီးစီး။
ကျောင်းဖြစ်လာ၊(အဆင့်၂ အမျိုးအစား လျှပ်စစ်တာဝန်ခံ အင်ဂျင်နီယာ ( လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ် )) ။
ကျောင်းဖြစ်လာ၊(အဆင့်၂ ၀ါယာလက်ဆက်သွယ်ရေးပညာရှင် (အီလက်ထရောနစ် အင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ်)) ။
ရုပ်သံထုတ်လွှင့်ခြင်းနည်းပညာ တိုးတက်စေရန်အတွက် အရည်အသွေးပြည့် အသံဖမ်း စတီဒီယို ပြီးစီး။
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနသို့ HITAC8150 နှင့် HITAC-10 တို့ စတင်မိတ်ဆက်။
ရုပ်သံထုတ်လွှင့်ခြင်းနည်းပညာဘာသာရပ် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအသစ်ပြဌာန်း၊ (ဖန်းတီးသူ၊ အနုပညာ
ကျောင်းအမှတ် (၃) ဆောက်လုပ်ပြီးစီး။
ကျောင်းအမှတ် (၄) ဆောက်လုပ်ပြီးစီး။
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း နည်းပညာကောလိပ်ကျောင်း( စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း နည်းပညာ ကျောင်း) အဖြစ် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိ။
အလုပ်အကိုင်ရရှိရေးအတွက် နည်းပညာလေ့ကျင့်သင်ကြား၊ (လက်တွေ့ ဘာသာရပ်) စတင်။
တိုကျိုနိုင်ငံခြားဘာသာ ကောလိပ်(sister school) တည်ထောင်။
အီလက်ထရောနစ် အချက်အလက် နည်းပညာဘာသာရပ် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအသစ်ပြဌာန်း၊
ပထမဆုံးနည်းပညာကောလိပ် အရည်အသွေးပြည့် အွန်လိုင်းစနစ်စတင်။
အသံနည်းပညာဘာသာရပ် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအသစ် ပြဌာန်း။
ဂျပန်လျှပ်စစ်နှင့်အတူဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်ခဲ့သော မိုင်ကွန်(microcontroller)နည်းပညာစနစ်(MES-II)ကို ၀ါရှင်တန်တွင် ကျင်းပခဲ့သောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ပြူတာအစည်းအဝေး၌ ကြေငြာခဲ့၊ အများစိတ် ၀င်စားမှုကို ရရှိ။
မီဒီယာ ဒီဇိုင်းဘာသာရပ်ဖြင့် စီဂျီဘာသာစတင်သင်ကြား၊
မိန်းကျောင်းအဆာက်အအုံ့တွင် ကွန်ပြူတာစင်တာ ပြလုပ်ပြီးစီး။
ပညာရေးအတွက်အသုံးပြုရန် ကွန်ပြူတာအကြီးစားHITAC M-160H စတင်မိတ်ဆက်။
ကျောင်းတည်ထောင်ပြီး ၃၀ နှစ်မြောက်ပွဲ၊ကျောင်းအခန်းအနားဖွင့်လှစ်။
CG . CAD . အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် YHP-1000 ကိုစတင်မိတ်ဆက်။
ပညာရေး ဆော့(ဖ်)၀ဲ ဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာန စတင်။
ကွန်ပြူတာဂရက်ဖစ်ဘာသာရပ် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း အသစ်ပြဌာန်း၊ ကျောင်းအမှတ်(၁၂)၊ ကျောင်း အမှတ်(၁၃)ဆောက်လုပ်ပြီးစီး။
YIS. CG အတွက်အသုံးပြု စနစ် ၃၃ ခု စတင်မိတ်ဆက်၊ AED-5. CG အတွက်အသုံးပြု စနစ်တိုးချဲ့၊
ပုံကြမ်းဆွဲရန်အတွက် အသုံးပြု ပုံကြမ်းခုံ အလုံး ၁၀၅ လုံးစတင်မိတ်ဆက်။
မီဒီယာအသစ်၊ စတာလိုက်၊ စတူဒီယိုပြု တည်ထောင်။
ကျောင်းအမှတ်(၉)(အိုအိုရှိမ၊ မီဒီယာ၊ စင်တာ)ပြုလုပ်ပြီးစီး။
(၁၂၀လက်မ မျက်နှာပြင်တီဗီနှစ်လုံး၊ လူအယောက် ၃၀ ဆန့်ခန်းမ)။
နှစ်ကြိမ်မြောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ CG စာတမ်းဖတ်ပွဲကို မိန်းကျောင်းတွင် ကျင်းပ။
ကျောင်းအမှတ် (၁၄)၊ ကျောင်းအမှတ် (၁၅) ဆောက်လုပ်ပြီးစီး။ စုပေါင်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ သုတေသန ခန်း တည်ထောင်။
လူကဖန်တီးထားသော ဥာဏ်ရေဥာဏ်သွေးဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ (လူကဖန်တီးထားသော ဥာဏ်ရည် ဥာဏ်သွေး ယုတ်တိဗေဒသုတေသနရဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအခွင့်အာဏာရ မန်ဆာချူးဆက် အင်ဂျင်နီယာတက္ကသိုလ်၏ Professor Marvin, Minsuki- အစရှိသည့် ကမ္ဘာ့အဆင့်(၁) ပရောဖက်ဆာ ၇ ယောက်တို့၏ သင်ခန်းစာ ဖိတ်ခေါ်ဆွေးနွေးပွဲ)။
ကျောင်းအမှတ်(၁၇) ဆောက်လုပ်ပြီးစီး၊ အယ်လဂိုရီသမ်(algorithm)ပညာရေးစနစ်ဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်။
ကား အီလက်ထရောနစ်လက်တွေ့ခန်းတည်ထောင်၊ ကျောင်းအမှတ်(၂၁) ဆောက်လုပ်ပြီးစီး။
သတင်းအချက်အလက်စနစ် ဖွင့်ဖြိုးရေးသာသာရပ်။ လူကဖန်တီးထားသော ဥာဏ်ရေဥာဏ်သွေးဘာ သာရပ် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း အသစ်ပြဌာန်း၊ လူကဖန်တီးထားသော ဥာဏ်ရေဥာဏ်သွေး (AI)ပွဲတော် (တိုကျိုရှယ်ယာစင်တာ)တွင် ပညာရေးကောလိပ်အဖြစ် တစ်ဦးတည်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တက် ရောက်ပြသခဲ့သည်၊ နိုင်ငံခြားမှလာ အဖွဲ့များလာရောက် လေ့လာခဲ့။
Pal စီးပွာရေး ကောလိပ် (Sister School)တည်ထောင်။
လက်တော့(ပ်)ကွန်ပြူတာ အသစ်အလုံး ၁၂၀ စတင်တင်သွင်းမိတ်ဆက်၊
စီဂျီ(ကွန်ပြူတာ ဂရက်ဖစ်)၏ ဂျပန်အမေရိက ထုတ်လုပ်မှု ဖလှယ်ပွဲ(ATRANTA-SHINJUKU CO-GRAPH’ 88) ကို အမေရိကန်နိုင်ငံအတိုလန်တာ အနုပညာတက္ကသိုလ်တွင် ဖူဂျီတီလီဗင်းရှင်းရဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့် ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့။
Marvinနှင့် Minsuki- ဖရောဖက်ဆာက ထပ်မံလာရောက်၍ နယူးလော့ ကွန်ပြူတာနှင့်ပတ်သတ်၍ ဆွေးနွေးပွဲ
စီနီယာသတင်းအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲခြင်းဘာသာရပ်(လက်ရှိ-အဆင့်မြင့် သတင်းအချက်အလက် စီမံခန့်ခွဲခြင်းဘာသာရပ် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအသစ်ရေးဆွဲပြဌာန်း။
ပညာရေးနှင့် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဘာသာရပ်တိုးတက်ဖွင့်ဖြိုးရေးရန် ရည်ရွယ်သောကျောင်းဖြစ်လာ၊ ကျောင်းအမှတ်(၁၉)တည်ဆောက်ပြီးစီး။
အီလက်ထရောနစ်သတင်းအချက်အလက် စီမံခန့်ခွဲခြင်းဘာသာရပ်တွင် ဂိမ်းပြုလုပ်ခြင်းသင်ခန်းစာ စတင်။
ဟမ်းဒီအမျိုးအစား ကွန်ပြူတာ PC-9801 (PC notebook) ကို စတင်မိတ်ဆက်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် စက်မှုလက်မှုဝန်ကြီး (သတင်းအချက်အလက် စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍) ကျောင်းကို လာရောက်ကြည့်ရူ။
အင်ဂလန်နိုင်ငံပညာရေး စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ကျောင်းကို လာရောက်လေ့လာ။
ဂျပန်-အမေရိကန်ပညာရေးဆိုင်ရာ ကောမတီ အဖွဲ့ဝင်(ဖူလူဘူလအီတို) ကျောင်းကို လာရောက် လေ့လာ။
ဂျပန်-အမေရိကန်ပညာရေးဆိုင်ရာ ကောမတီ အဖွဲ့ဝင်(ဖူလူဘူလအီတို) ကျောင်းကို လာရောက် လေ့လာ
မာတီဒီဇိုင်း ၉၃ ပွဲကျင်းပ ၊ မာတီဒီဇိုင်းစတူဒီယိုတည်ဆောက် ပြီးစီး၊
ကွန်ပြူတာ ဖျော်ဖြေမှု ဘာသာရပ်(လက်ရှိ-ဂိမ်းတည်ဆောက်ခြင်းဘာသာရပ် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း အသစ်ရေးဆွဲ ပြဌာန်း။
ကွန်ပြူတာနက်ဝေါ့(သ်)ဘာသာရပ်၊ စီဂျီရုပ်သံ ဘာသာရပ်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအသစ်ရေးဆွဲပြဌာန်း။
Mac world expo ’ ၉၅ ပွဲကျင်းပ။
Digital content festival’ ၉၅ပွဲကျင်းပ။
သြစတြေးလျ(World Solar Challenge ) ၃ထောင်ကီလိုမီတာ ပန်းတိုင်ရောက်၊(ကမ္ဘာအဆင့် ၂၄)
တိုကျိုဂိမ်းဆုပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပ။ (ကျင်းပပြီးနောက်ပိုင်း နှစ်တိုင်းပွဲကျင်းပ)
ဂရက်ဖစ်ဒီဇိုင်းဘာသာရပ်၊ ၀က်(ဘ်)ဒီဇိုင်းဘာသာရပ် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအသစ်ရေးဆွဲပြဌာန်း။ ကျောင်းအမှတ် (၂၀) တည်ဆောက်ပြီးစီး။
ကွန်ပြူတာဂရက်ဖစ်သုတေသန ဘာသာရပ်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအသစ်ရေးဆွဲပြဌာန်း။ MIDI World’ ၉၈ပွဲကျင်းပ။
လာမည့် ၂၀၀၁ခုနှစ်တွင် ကျရောက်မည့် ကျောင်းနှစ်ပတ်လည် အနှစ်(၅၀)မြောက်ကို ကြိုဆိုသော ပွဲ
လုပ်ဆောင်၊ ( JRရှင်းအိုကုဗိုလ်ဘူတာရုံနရံဆေးသုတ်ခြင်း ပရောဂျက်။)
ကျောင်းနှစ်ပတ်လည်အနှစ် (၅၀)ပြည့်အောင်မေ့ဖွယ်အခန်းအနားကို (ကျောင်းပွဲတော်)ကို ရှင်းဂျူကု NS အဆောက်အဦးတွင် ကျင်းပ။
Hitachi Group [ကမ္ဘာအတွက် ကောင်းသောအရာ ပိုစတာ] တွင် အထူးဆု ရရှိ။
KONIKA [Konika QP digital photo contest ] တွင် အထူးဆု ရရှိ။
(၁၁)ကြိမ်မြောက် ဂျပန်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကောလိပ်ကျောင်းများ စက်ရုပ်ပြိုင်ပွဲတွင် Excellence Hardware အထူးဆုရရှိ။.
အကျောင်းအမှတ်(၇)တည်ဆောက်ပြီးစီး၊(မြေပေါ် ၁၀ ထပ်၊ မြေအောက် ၂ ထပ်)
၂၀၀၃	ကျောင်းအမှတ် (၇) တည်ဆောက်ပြီးစီး။
တိုးချဲ့ဘာသာရပ်(အိုင်တီစင်မင်နာ၊ ဖန်တီးသူ စင်မင်နာ)၊ အထက်တန်းကျောင်းဆရာ၊ ၀န်ထမ်းများအတွက် အိုင်တီသင်ခန်းစာများ ဖွင့်လှစ်။(နောက်ပိုင်း နှစ်စဉ် ဖွင့်လှစ်သင်ကြား)။
အဆင့်မြင့် ကွန်ပြူတာဂရက်ဖစ်ဘာသာရပ် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအသစ်ရေးဆွဲပြဌာန်း။
နက်ဝေါ့လုံခြုံရေးဘာသာရပ်(ညနေပိုင်း တန်းခွဲ) သင်ရိုးညွှန်းတမ်း အသစ်ရေးဆွဲ ပြဌာန်း။
ကမ္ဘာ့အဆင့်မြင့်ဆုံးစီဂျီပြိုင်ပွဲ[ SIGGRAPH 2006 ]အနုပညာဘာသာရပ် အရွေးချယ်ခံ ထုတ်ကုန် ပြုလုပ်ခြင်းတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်။
အသစ် စိန်ခေါ်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ခြင်း ပါဝင်သော သင်္ကေတကို ကြေငြာခဲ့။
ပင်ပမှ အရည်အသွေးသတ်မှတ်သော ပညာရေးရလဒ်၊ ကျောင်းသားထောက်ပံ့ရေးစနစ် စသည့် အချက် ၄၇ ချက် လိုအပ်ချက်အားလုံးပြီးမြောက်။
အကြိမ်(၄၆)ကြိမ်မြောက် နည်းပညာ ကျွမ်းကျင်မှု ဂျပန်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲတွင် ငွေ၊ ကြေးတံ ဆိပ်ရရှိ။
အကြိမ်(၁၇)ကြိမ်မြောက် ဂျပန်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကောလိပ်ကျောင်းများ စက်ရုပ်ပြိုင်ပွဲ ခြေနှစ်ချောင်း လမ်းလျှောက်စက်ရုပ်ပြိုင်ပွဲတွင် ဗိုလ်ဆွဲ။
Hygeia huge Christmas banner Contest Grand Prix တွင် ဆုရ။
အကြိမ် ၅ ကြိမ်မြောက် ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုကြေငြာချက် CM ကျောင်းသားဆုတွင် ထူးချွန်ဆုရရှိ။
လူငယ်လက်မှုလက်ရာပြိုင်ပွဲတွင် ရွှေ၊ငွေ ဆုတံဆိပ်၊ ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းစိတ်ဓာတ် ဆုတံဆိပ် ရရှိ။
အကြိမ်(၄၇)ကြိမ်မြောက် နည်းပညာ ကျွမ်းကျင်မှု အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲတွင် ရွှေ၊ငွေ၊ ကြေးတံဆိပ်၊ ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းစိတ်ဓာတ် ဆုတံဆိပ်ရရှိ။
[တိုကျိုဂိမ်းဆု]ရဲ့ ဂျပန်အီလက်ထရောနစ်ပြခန်း(ရုံ)ငယ်တွင် အကောင်းမှတ်တမ်းအဖြစ် လူတစ် သောင်းအထက် လာရောက်ကြည့်ရှု။
ကမ္ဘာ့စီဂျီဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များစုဝေးရာ [ SIGGRAPH ] [SIGGRAPH ASIA2009]တွင် ကျောင်းသား ထုတ်ကုန်များကို ပြသ။
Hygeia huge Christmas banner Contest Grand Prix တွင် ထူးချွန်ဆု၊ Hygeia ဆု၊ မန်းနေဂျင်း ဒါရိုက်တာဆု ရရှိ။
အကြိမ် ၃ ကြိမ်မြောက် ဖူကုအိုက ဂိမ်းပြိုင်ပွဲတွင် ဖူကုအိုက မြို့တော်ဝန်ဆုရ။
မိုင်ဘိုင်းအပလီကေးရှင်း ဘာသာရပ် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအသစ်ရေးဆွဲပြဌာန်း။
ဇာတ်ကောင်ဒီဇိုင်းဘာသာရပ် (ညနေပိုင်းတန်းခွဲ) သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအသစ်ရေးဆွဲပြဌာန်း။
အကြိမ်(၄၈)ကြိမ်မြောက် နည်းပညာ ကျွမ်းကျင်မှု ဂျပန်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲတွင် ရွှေ၊ ငွေတံဆိပ်၊ ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းစိတ်ဓာတ် ဆုတံဆိပ်ရရှိ။
SoftBank mobile ရဲ့ အသိအမှတ်ပြုရရှိ။
Softbank Solution Provider (SSP)အဖြစ် ပညာရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကျောင်းအဖြစ် ပထမဆုံး သင်ခန်းစာကို သင်ကြား။
အကြိမ် (၃)ကြိမ်မြောက် ဖူကုအိုကဂိမ်းပြိုင်ပွဲ။
၀က်(ဘ်) စနစ် ဘာသာရပ် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအသစ်ရေးဆွဲပြဌာန်း။
မိန်းကျောင်းအသစ်တည်ဆောက်ပြီးစီး(မြေပေါ် ၉ ထပ်၊ မြေအောက် ၂ ထပ် )။
အကြိမ်(၄၈)ကြိမ်မြောက် နည်းပညာ ကျွမ်းကျင်မှု ဂျပန်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲတွင် ရွှေ၊ ငွေ၊ကြေး တံဆိပ်ရရှိ။
အကြိမ်(၄၁)ကြိမ်မြောက်နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲတွင် ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း စိတ်ဓာတ် ဆုတံဆိပ်ရရှိ။
ဂျပန် နှင့် ဂျာမနီ အနှစ် ၁၅၀ မြောက် နှီးနှောဖလှယ်ပွဲတွင်[ ဂျပန်ကျောင်းသားဖြင့် အ၀တ်ထုပ်ပိုးခြင်း ပြိုင်ပွဲ] အထူးချွန်ဆုံးဆုရရှိ
ဂျာမနီ၊ ဂျပန်ကျောင်းသားများဖြင့် အ၀တ်ထုပ်ပိုးခြင်း ပြိုင်ပွဲဆုရပစ္စည်း။
ရှင်းဂျူကု ဖန်တီးသူ ပုံပြိုင်ပွဲ၂၀၁၂ တွင် အထူးချွန်ဆုံးဆုရရှိ။
ဂျပန်ဘာသာစကားကျောင်းဆရာများမှ ရွေးချယ်သော နိုင်ငံခြားပညာသင်ကျောင်းသားများအတွက် ပညာဆက်လက်ဆည်းပူးရန် ထောက်ခံသော ကောလိပ်ကျောင်းဆုကို ရွေးချယ်ရရှိ
ရှင်းဂျူကု ဖန်တီးသူ ပုံပြိုင်ပွဲ၂၀၁၂ တွင် အထူးချွန်ဆုံးဆုရ ပုံ။
NEC films Solution ကုန်စည်ပြပွဲ ၂၀၁၂ တွင် ခင်းကျင်းပြသ။
အထက်တန်းကျောင်းပညာရေးစက်ယန္တရားအဖြစ် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ပထမဆုံး LPI-Japan OSS-DB အကယ်ဒမီ အသိအမှတ်ပြုကျောင်းအဖြစ် ဆုံးဖြတ်။
တိုကျိုဒိုးမူတွင် ကျောင်းအားကစားပွဲတော်ကို ကျင်းပ။
NEC films Solution ကုန်စည်ပြပွဲ ၂၀၁၂
အသက် ၂၀ နှစ်အောက် ပရိုဂမ်းမင်းပြိုင်(စပွန်ဆာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် စက်မှုလက်မှုဝန်ကြီးဌာန(METI)) [အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် စက်မှုလက်မှု ၀န်ကြီးဌာန ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးသတင်းအချက်အလက်မူဝါဒဆိုင်ရာဌာနမှူးဆု]
ဂျပန် နိုင်ငံခြားပညာသင်ကျောင်းသားများအတွက် ပညာဆက်လက်ဆည်းပူးရန် ကောလိပ်ကျောင်း ဆုရရှိ (၂ နှစ်ဆက်တိုက်)။
ကိုယ်ပိုင်ကောလိပ်ကျောင်းများအရည်အသွေး သုသေသနအဖွဲ့[ ပြင်ပမှ အရည်သွေးသတ်မှတ် ချက် ] အားလုံးပေါင်းအချက် ၄၇ ချက် ပြည့်စုံ။ ( ရှေ့အကြိမ်တန်ဖိုးသတ်မှတ်ချက်အပါ။ ၂ကြိမ် ဆက်တိုက်။)
အသက် ၂၀ နှစ်အောက် ပရိုဂမ်းမင်းပြိုင်ပွဲ။
(စပွန်ဆာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် စက်မှုလက်မှုဝန်ကြီးဌာန(METI))
ဂရက်ဖစ်ဒီဇိုင်းဘာသာရပ်၏ စက်မှုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အကယ်ဒမီအဖွဲ့[ MANEKKO camera] ကို Apple Store မှ ဖြန့်ချီ။ ပညာရေးကတ်တလော့၏ လူကြိုက်များထုတ်ကုန်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံရ။
လက်တွေ့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် လေ့ကျင့်ရေး သင်တန်းကျောင်းအဖြစ်စတင်အသိအမှတ်ပြုခံရ။
လူငယ်လက်မှုလက်ရာပြိုင်ပွဲသို့ ၀က်(ဘ်)ဒီဇိုင်းဘာသာရပ်၊ ဂရက်ဖစ်ဒီဇိုင်းဘာသာရပ်၊ ဆောက်လုပ် ရေးလျှပ်စစ်ပညာရှင်ဘာသာရပ် အသီးသီးတို့လုပ်ငန်းဖြင့် ဆုရရှိ။
အကြိမ် (၂)ကြိမ်မြောက် ICT Network troubleshooting ပြိုင်ပွဲ(Dwango Cup)တွင် ထူးချွန်ဆုရရှိ။
NetRiders CCNA Japan 2014 Competition တွင် အောင်မြင်။ ဂျပန်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာ။
NetRiders CCNA Japan 2014 Competition
အကြိမ်(၅၂)ကြိမ်မြောက် နည်းပညာ ကျွမ်းကျင်မှု ဂျပန်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲတွင် ရွှေ၊ငွေ၊ ကြေး၊ ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း စိတ်ဓာတ်ဆုတို့ ရရှိအောင်မြင်။
ဂျပန်နိုင်ငံခြားကျောင်းသားပညာသင်ကြားခြင်းဆု၂၀၁၄ (အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ကောလိပ်အမျိုး အစားဆု)ကို ၃ နှစ်ဆက်တိုက်ရရှိ။